Fahazarana mampahia na mampihena
1. Matoria farafahakeliny adiny 6 na adin’ny 7 isaky ny alina
Raha ny tena marina, mila matory :
adiny 6 na 7 ny olon-dehibe ;
adiny 8 ny ankizikely ;
ary adiny 9 ny adolantsento.
Satria mandritra ny taonan’ny adolantsento no mitombo halavana be ny vatana. Izany hoe, mihalava kokoa isika rehefa tonga amin’ny taonan’ny adolantsento. Izay no tena ilavana torimaso be amin’io vanim-potoana io. Satria mandritra ny torimaso no hamokaran’ny vatana hormones mampitombo halavana.
Noho izany, aza miari-tory. Rehefa reraka ny vatana dia ataony izay ahazoany hery mba hanoloana izay tokony ho azony tamin’ny torimaso. Aiza no ahitany hery ? Any amin’ny sakafo. Noho izany, andeha hamokatra hormones izay hampirisika anao ho taitaitra toa ny noana ny vatana, nefa reraka fotsiny ianao.
Sady amin’ny alina no tena te hitsaingotsaingoka nefa tsy noana isika satria tsy misy atao.
Araky ny teorian'ny dokotera Pelayo, ny fika tsara (sy mora indrindra) dia ny fametrahana ora hifihazana ary mikajikajy ny isan'ny ora ilaina mba hatorizana (adin'ny 8 no moyenne tsara) : "Raha te hifoha amin'ny 7 ora sy sasany maraina ianao, ka mila matory adin'ny 7 sy sasany, dia tokony hatory amin'ny 12 ora alina latsaka fahefany."
2. Mitadiava fialam-boly
Rehefa tsy misy atao isika dia te hihinan-kanina fotsiny mba handehanan’ny fotoana haingana kokoa satria misy atao, na dia tsy noana akory aza. Izay no anisan’ny antony hitenenana ny olona hanao fanatanjahantena rehefa te hihena izy. Satria fialam-boly ihany koa ny fanatanjahantena. Nefa misy fialam-boly hafa ihany koa : mandeha miantsena, manao nail art (onglerie), milalao maquillage, milalao volo, manjaitra, manoratra, mamaky boky, mitendry zava-maneno, mandihy, mivoaka miaraka amin’ny namana, mandeha boaty, mitsangatsangana, …
Ito tranon-kala ito sy ny pejy facebook ohatra no mba fialam-boliko. Taloha, ny nanalako andro dia ny nail art, filalaovam-bolo, maquillage, fiantsenana ary ny fanjairana. Midadasika be izany ny safidinao e !
Bravo, nahavita namaky ny vahaolana mampihena ianao. Raha tianao ny hahazo famintinana ny tranon-kala dia indro misy boky izay mamintina ny antony mampatavy.
Tsindrio ito icone ambany ito raha tianao ny hahazo ny boky momba ny antony mampatavy